Barca Oo Hogaanka La Liga Sii Dheeresatay Kadib Markii Camp Nou Si Raaxo Uga Badiyeen Athletic Bilbao %
Kooxda kubada cagta Barcelona ayaa waxay hogaanka horyaalka La Liga, ee wadanka Spain, ay uga qabatay Atletico Madrid, oo labaad fadhisa 11 dhibcood oo nadiif ah kadib markii ay guul weyn ay garoonkooda Camp Nou kaga gaareen dhigooda Athletic Bilbao.
Laakiin, Atletico Madrid, ayaa waxay kulan la balansan tahay caawa oo Axad ah dhigeeda Villarreal, waxaana hadii ay soo badiso uu noqon doonaa farqiga dhibcaha ee labadaan naadi udhaxeeya 8 Buundo, maadaama ay hadda kala leeyihiin 78 dhibcood iyo 64.
Barcelona ayaa waxay uga soo badisay naadiga Bilbao oo marti u ahayd 2-0, waxaana goolasha ay shaqeysatay Bogga koowaad, iyadoona uga mahad-naqeysa goolashaan ciyaartoyda kala ah: Paco Alcacer iyo waliba Lionel Messi.
Alcacer oo goolka furitaanka Bluagrana, udhaliyay ayaa wuxuu helay daqiiqadii 8aad ee qeybta koowaad halka ciyaaryahan Messi, uu goolkaas dhaliyay daqiiqadii 30aad ee qeybta koowaad labadda goolna Leo kaalin fiican ayuu ka qaatay.
Goolka uu dhaliyay Messi, ayaa wuxuu ka dhigan yahay goolkiisii 25aad, kaasoo uu fasal ciyaareedkan oo dhan uu ka dhaliyo horyaalka labaad ee dunida ugu xiisaha badan, isagoona ah waqti xaadirkaan hogaamiyaha tartanka gool dhalinta ee La Liga.
Inta kulanka uu socday Bluagrana, ayaa waxay haysatay kubada 70% taasoo ka dhigan in inta badan maamulka ciyaarta ay iyada lahayd, halka Bilbao ay haysatay Banooniga 30% waxay la macno tahay in awooda kulanka ay Barca lahayd.
Labadda kooxood ayaa waxaa la kala siiyay min Labo Kaar oo Jaalo ah, taasoo ka dhigan in kulanka inta uu socday la bixiyay Afar Kaar oo Jaalo ah, mana jirin ciyaaryahan kulanka looga saaray Kaarka Gaduudan ama Casaan la siiyey.
Sikastaba, guusha Barcelona ay ka heshay Athletic Bilbao ayaa geesta kale waxay ka dhigan tahay inay sii wadato rikoorkeeda guul daro la’aanta dhamaan kulamadii ay fasal ciyaareedkan ka dheeshay La Liga iyadoona waliba aan dhinaceeda dhulka la dhigin.